I-HTC Eksodus sele inomhla wenkcazo esemthethweni | I-Androidsis
Sele siyazi iinyanga ukuba i-HTC isebenza kwi-blockchain yayo yokuqala ye-smartphone. Ifowuni eya kuthi ifike kwintengiso phantsi kwegama leEksodus, njengoko inkampani yaseTaiwan ngokwayo sele iqinisekisile. Ubukho beli fowuni baziwa iinyanga, nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ithethwayo malunga nokunikezelwa kwalo. Kude kube ngoku, xa inkampani ngokwayo sele ilindele lo mhla.
Kwaye kubonakala ngathi ngekhe silinde ixesha elide ukudibana ne-HTC Eksodus. Kungenxa yokuba inkampani icwangcise Umnyhadala wokwazisa umnxeba wale nyanga ye-Okthobha. Inyanga esiyibonayo ifika ilayishwe ziindaba.
Kuye kwividiyo kwi-Instagram ukuba lo mhla wokubonisa i-HTC Eksodus ubhengeziwe. Umhla okhethwe ngumnxeba wokunikezelwa kwefowuni ngu-Okthobha 22. Ke kwisithuba nje esingaphezulu kweveki siya kuba nakho ukusazi esisisixhobo sivela kwinkampani ngokusemthethweni.
Iposi elibiwe I-HTC esemthethweni i-EXODUS (@ htc.exodus) kwi Okthoba 12, 2018 kwi-10: 12am PDT
Phezulu apha Uyayibona le vidiyo ukuba inkampani iqhubela phambili kuthi kwaye ayisixeleli okuninzi malunga nefowuni. Kodwa ngandlela thile iyasinceda ukuba sifumane umbono wento esinokuyilindela kuyo. Idatha entsha malunga nesixhobo inokuthi ifike kule veki.
Le HTC Eksodus lilinge elitsha lenkampani ukoyisa imeko yalo. Ukuthengisa kwabo kuye kwawa iinyanga ngeqondo elikhulu, kwaye siyabona ukuba ishishini lakhe lokunxibelelana ngomnxeba lenza njani nelahleko yezigidi. Uninzi luthelekelela ukuba inkampani izakuyeka kungekudala ukuvelisa iifowuni. Okwangoku, baqhubeka nokukhupha iimodeli kwintengiso.
Nge-22 ka-Okthobha siya kuba nakho ukwazi yonke into ngale fowuni intsha ye-HTC. Imodeli yokuphayona kwi-Android, njengoko iya kuba yifowuni yokuqala eyenzelwe ngokukodwa i-blockchain. Ke kuyakufuneka ukuba kubonwe ukuba ngaba kukho imfuneko na kwintengiso okanye ivelisa inzala phakathi kwabathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-HTC's blockchain smartphone sele inomhla wentetho
Ungasusa njani ukurekhodwa kwelizwi kuMncedisi kaGoogle